Ubomi kwi-Old Ningbo yi-Moon Lake-igumbi lokulala lesibini (malunga nemizuzu elishumi yokuhamba ukusuka kwisikhululo saseNingbo) - I-Airbnb
Ubomi kwi-Old Ningbo yi-Moon Lake-igumbi lokulala lesibini (malunga nemizuzu elishumi yokuhamba ukusuka kwisikhululo saseNingbo)
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe ongu茶
Elinye lamagumbi okulala amabini anamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlala elinye kufuneka linyuswe kumgangatho wesithathu kwaye akukho lift. Ibhedi yi-1.2 yeemitha ububanzi.Ukuba ningabantu ababini, ungajonga kwelinye igumbi lam lokulala elikhulu.Indawo iya kuba nkulu kakhulu. Uluntu oludala olujongene neYuehu Park kunye neYuehu Shengyuan. Ikufuphi kakhulu neSitishi sikaloliwe saseNingbo *Isikhululo sikaloliwe saseMntla*. Imigca yeMetro 1, 2, kunye ne4 imalunga nokuhamba imizuzu eyi-10-15. Kukho iindawo zokumisa iibhasi ekungeneni kwesikhululo sikaloliwe. kuluntu. Lo mmandla elifikeleleka ngqo. [Kutsha nje baninzi abasebenzi bokwakha ekuhlaziyeni uluntu.Ulwakhiwo luzakuba nomsindo kancinci ngo 7-8 ekuseni, kwaye luzoqhubeka kude kube nguSeptemba.Ukuba uhlala kwelinqanaba lamva nje, ungangxola ukuba ulala kade, kufuneka ucinge ngayo.]
Kudala ndingekho ndikhe ndigoduke ngamanye amaxesha.Kukho umama osebenza eofisini ongenangqondo nobukekayo ekhaya phakathi evekini.Ungu "bully" kakhulu kwaye unomdla kakhulu kwaye uyakwazi ukudibana nawe. Elona gqabaza likhohlakeleyo nelona lonwabisayo endakha ndaliva lelokuba wonke umntu uvakalelwa kukuba ukubuyela ekhaya akufani nokuhlala kwikhaya elithile, kufana nokutyelela umntu ~
Ndizele lumdla wokwazi zonke iintlobo zezinto ezintsha.ukuba uzimisele ukwabelana nam ngamava akho obomi ohlukeneyo, undifundise iziphiwo zakho ezahlukeneyo kungangcono.Ndiliqela labaphulaphuli eli opposite nomama. ngathi bakuxelele Zonke iintlobo amabali inoveli, Ndikulungele kakhulu ukuva kuwe!
Igumbi le-btw ngumnyango otyibilikayo, akukho sitshixo, iitawuli zibekwe kwigumbi lokulala, ukuba awukwazi ukufumana into oyifunayo, unokubonisana nangaliphi na ixesha.
Iinkuni, irayisi, ioli netyuwa kufuneka zihlawulwe ngeendleko zazo, yaye ezinye izinto eziyimfuneko zemihla ngemihla zigqityiwe.
Ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, kunye nebalcony zonke zisesidlangalaleni, zisimahla ukuba zisetyenziswe, kwaye zigcine zicocekile.
4.89 · Izimvo eziyi-183
Izindlu ezindala eziphila kakhulu ziphantse zifane
I-Yuehu Park iphambi kwekhaya
Ecaleni loluntu yiYuehu Shengyuan.Zikhona zonke iintlobo zeendawo zokutyela ezikumgangatho ophezulu.
Kwelinye icala, malunga nemizuzu emi-6-7 ukuhamba, kukho iSanjiang Shopping Supermarket.Kukho iivenkile zakusasa ezikufutshane, i-Irvine kunye nezinye iindawo zokubhaka, kunye neevenkile ezahlukeneyo zeziqhamo.
Umbuki zindwendwe ngu- 茶